कसरी हेर्ने स्मार्टफोनमा वाइफाइ पासवर्ड ? - Everest Dainik - News from Nepal
कसरी हेर्ने स्मार्टफोनमा वाइफाइ पासवर्ड ?
वाइ-फाइ पासवर्ड सम्झिनु कम गाह्रो छैन । उसरी पनि एकपल्ट आफ्नो डिभाइसमा पासवर्ड राखिसकेपछि यसलाई सम्झिराक्नु पर्ने आवश्यकता हुँदैन ।
फेरि ल्यापटप या कम्प्युटरमा वाइफाइ पासवर्ड मजाले हेर्न सकिन्छ तर स्मर्त्फोंमा भने यस्तो सुविधा हुँदैन यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा हामीले नयाँ डिभाइस किन्यौं या अन्य कुनै कारणले हामीले कुनै नयाँ ग्याजेटमा पासवर्ड राख्नुपरेको खण्डमा समस्या आउन सक्छ ।
कतिपय मानिसले आफ्नो पासवर्डमा आफ्नो फोन नम्बर राखेका हुन्छन् । पासवर्ड सम्झिराख्न यो राम्रो तरिका भएपनि सुरक्षाका दृष्टिले यो राम्रो होइन ।
त्यसैले पासवर्ड राख्दा ऐजतिल खालको र सजिलै अनुमान लगाउन नसकिने खालको राख्नु पर्दछ । तर यस्तो पासवर्ड सजिलै याद गर्न नसकिने भएकाले नयाँ डिभाइसमा प्रयोग गर्नु पर्दा भने समस्या नै आउन सक्छ ।
अब यदि वाइफाइको पासवर्ड याद छैन तर त्यसको आवश्यकता पऱ्यो र त्यो कुनै ल्यापटपमा पनि प्रयोग भएको छैन भने आफ्नो एण्ड्रोइड मोबाइल या ट्याब्लेटमा त पासवर्ड हेर्न सम्भव हुन्न । तर यस्तो अवस्थामा पनि हामीले सजिलै वाइफाइ पासवर्ड पत्ता लगाउन सक्दछौं ।
यसका लागि अरु केही गर्नु पर्दैन मात्र एउटा एप डाउनलोड गरे पुग्छ । यसका लागि गुगल प्लेस्टोरबाट ‘वाइफाइ रिकभरी’ नाम गरेको एप डाउनलोड गर्नु पर्ने हुन्छ । तर यस एप्ले काम गर्न तपाईंको मोबाइल भने ‘रुट’ गरिएको हुनुपर्ने हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस छिमेकमै यस्तोः अविवाहित युवतीलाई मोबाईल प्रतिबन्ध, नियम नमाने कडा दण्ड र ढाई लाख जरिवाना
यस एपलाई डाउनलोड गरेर एपलाई ‘सुपर युजर एक्सेस’ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिमात्र एपले आफ्नो काम गर्न सक्छ । एपले काम गर्न थालेपछि मोबाइलको स्क्रिनमा कनेक्ट भएका वाइफाइहरूको लिस्ट देखिन्छ । त्यसका साथै ती सबैको पासवर्ड समेत स्क्रिनमा देखिनेछ ।
यदि यसमा रहेको लिस्ट लामो भएको खण्डमा आफ्नो नेटवर्कको नाम राखेर समेत सर्च गर्न सकिन्छ । स्क्रिनको माथिल्लो भागमा रहेका तीनवटा थोप्लामा क्लिक गरेर ‘एक्सपोर्ट’ अप्सन छानेपछि सबै नेटवर्कका नाम र तिनका पासवर्ड फाइलमा सेभ गर्न सकिनेछ ।
याे पनि पढ्नुस दुर्गम गाउँ धुर्कोटमा अब फ्रि वाईफाई
यदि यी सूचनाहरू कम्प्युटरमा सेभ गर्ने हो भने यसले पछिका लागि पनि सजिलो हुन सक्छ ।
तर यस्ता कुनै पनि तरिकाले काम गरेनन् भने राउटरको रिसेट बटन छँदैछ । यसलाई थिच्ने बित्तिकै राउटर फ्याक्ट्री रिसेट हुनेछ र यसमा नयाँ पासवर्ड राख्न मिल्नेछ ।
ट्याग्स: mobile phone, Wifi